ကငျဆာကို ကာကှယျလို့ရသလား - OnDoctor
By Kaung Htet Naing	 On Dec 24, 2018 Last updated Mar 5, 2019
ကင်ဆာ ဆိုတဲ့ အသံ ကြားလိုက်တာနဲ့ လူတော်တော်များများ ကြောက်သွားကြမယ် ထင်ပါတယ် ။ ကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ထဲမှာ ကင်ဆာဟာ ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာဟာ ကမ္ဘာမှာ သေနှုန်း အများဆုံး ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ပက လေထု ညစ်ညမ်းမှုတွေ နဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ ၊ စက်ရုံသုံး ဓာတုပစ္စည်းတွေ ၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအသောက် အစရှိတာတွေဟာ ကင်ဆာရောဂါ ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် မှာ ရှိတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တွေကို အခြေခံ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ အရာတွေဟာ ဆဲလ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦး တစ်ခု ခိုင်မာဖို့ အခြေခံအုတ်က အရေးကြီးသလိုပဲ ခန္ဓာကိုယ် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်း ဆဲလ်တွေက အရေးကြီးပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်က ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေဟာ ကိုယ်တွင်းက ဆဲလ်တွေ ပုံမှန်ဖြစ်ပွားမှု ကို ထိန်းချုပ်ပေးထားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါ ပုံမမှန်တဲ့ ဆဲလ်ပွားများမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကင်ဆာ ဖြစ်လာရပါတယ်။
ကင်ဆာ ဖြစ်တာကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ???
ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးလိုလိုမှာ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါ အမျိုးအစား တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေဟာ ကွဲပြားကြပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် အရက် ၊ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးတွေဟာ အသည်းကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်တာ များရင်တော့ အဆုတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ မဖြစ်ပွားနိုင်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေကို ပြုပြင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာ တွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမှာ ဖြစ်သလို အရက်ကိုလည်း သောက်ဖို့ သင့်တဲ့ ပမာဏထက် ပိုမသောက်မိဖို့ သတိပြုရပါမယ်။
ကင်ဆာရောဂါ ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စက်ရုံသုံး အညစ်အကြေးတွေ ကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရပါမယ်။ ပြုပြင်ထားတဲ့ အသားနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လည်း အလွန်အကျွံ စားတာကို ရှောင်ရပါမယ်။
ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသည်းကင်ဆာတွေ မဖြစ်ဖို့ အတွက် အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးထားရပါမယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဟာလည်း Human papilloma virus တွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်မခံရအောင် ကာကွယ်ဆေးကို ကြိုထိုးသင့်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါ စဖြစ်စေတဲ့ ပုံမမှန်ဆဲလ်ပွားတာ ကို ကြိုတင်တားဆီးနိုင်အောင် Antioxidant တွေ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို များများစားပေးသင့်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ဘာလို့ သေဆုံးရသလဲ ???
ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂါတွေ ဟာ ကင်ဆာကြောင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
တစ်ချို့သော ကင်ဆာရောဂါ တွေမှာ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်ပါတယ်။ ထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေဟာလည်း တစ်ခါတစ်လေ ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး တွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာဆဲလ်တွေ အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ရောက်သွားတဲ့ အခါမှာလည်း အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါ တွေ ဖြစ်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားဟာ ကျသွားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လည်း ကင်ဆာရောဂါ ကို ကုသရတဲ့ ဆေးတွေဟာလည်း ခုခံအားကို ကျသွားစေနိုင်တဲ့ အတွက် ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ်တွင်းကို ပိုးမွှားတွေ ဝင်ရောက်ပြီး အသက်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအတော်များများဟာ ကင်ဆာရောဂါ ပျံ့နှံ့တဲ့ အချိန်မှသာ ဖြစ်တာများပါတယ်။
ကင်ဆာ မပျံ့နှံ့ခင် မှာ စောစောစီးစီး သိရှိပြီး ကုသမယ်ဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါကြောင့် သေနိုင်ချေဟာ လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ခါစမှာ အလုံးအကျိတ်ဟာ သိပ်မကြီးသေးတဲ့ အတွက် ဒီလို ဖြစ်ခါစ အလုံးအကျိတ် ကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ် ကုသလိုက်မယ် ဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါ အရှင်းပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ခါစမှာ စောစောစီးစီး ကုသနိုင်ဖို့ အတွက် ကိုယ်မှာ ပုံမမှန်တဲ့ အကျိတ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ တစ်နေရာရာပေါ်လာခဲ့ရင် ကင်ဆာ ဟုတ်မဟုတ် သိရှိဖို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန် နဲ့ တိုင်ပင် စစ်ဆေးပြီး ကုသရပါမယ်။
ကငျဆာ ဆိုတဲ့ အသံ ကွားလိုကျတာနဲ့ လူတျောတျောမြားမြား ကွောကျသှားကွမယျ ထငျပါတယျ ။ ကူးစကျရောဂါ မဟုတျတဲ့ ရောဂါတှေ ထဲမှာ ကငျဆာဟာ ပါဝငျပွီး ကငျဆာဟာ ကမ်ဘာမှာ သနှေုနျး အမြားဆုံး ဖွဈစတေဲ့ ရောဂါတှထေဲမှာ တဈခုအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။
ပွငျပက လထေု ညဈညမျးမှုတှေ နဲ့ အန်တရာယျရှိတဲ့ ဓာတျငှတှေ့ေ ၊ စကျရုံသုံး ဓာတုပစ်စညျးတှေ ၊ ထိနျးသိမျးပွုပွငျထားတဲ့ အစားအသောကျ အစရှိတာတှဟော ကငျဆာရောဂါ ကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျ မှာ ရှိတဲ့ အင်ျဂါ အစိတျအပိုငျး တှကေို အခွခေံ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပေးထားတဲ့ အရာတှဟော ဆဲလျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အဆောကျအဦး တဈခု ခိုငျမာဖို့ အခွခေံအုတျက အရေးကွီးသလိုပဲ ခန်ဓာကိုယျ ပုံမှနျအလုပျလုပျနိုငျဖို့ အတှကျလညျး ဆဲလျတှကေ အရေးကွီးပါတယျ။
ပတျဝနျးကငျြက ကငျဆာဖွဈစနေိုငျတဲ့ အရာတှဟော ကိုယျတှငျးက ဆဲလျတှေ ပုံမှနျဖွဈပှားမှု ကို ထိနျးခြုပျပေးထားတဲ့ ဖွဈစဉျကို ကမောကျကမ ဖွဈသှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒီအခါ ပုံမမှနျတဲ့ ဆဲလျပှားမြားမှုတှေ ဖွဈပျေါလာပွီး ကငျဆာ ဖွဈလာရပါတယျ။
ကငျဆာ ဖွဈတာကို ဘယျလို ကာကှယျမလဲ ???
ကိုယျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျး အားလုံးလိုလိုမှာ ကငျဆာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကငျဆာရောဂါ အမြိုးအစား တဈခုခငျြးစီ အလိုကျ ရောဂါကို ဖွဈစနေိုငျတဲ့ အရာတှဟော ကှဲပွားကွပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ အရကျ ၊ အသညျးရောငျအသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးတှဟော အသညျးကငျဆာကို ဖွဈစနေိုငျပွီး ဆေးလိပျသောကျတာ မြားရငျတော့ အဆုတျကငျဆာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကငျဆာရောဂါ မဖွဈပှားနိုငျအောငျ ကိုယျ့ရဲ့ မကောငျးတဲ့ အကငျြ့တှကေို ပွုပွငျဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။ ဆေးလိပျသောကျတာ တှကေို ရှောငျကွဉျရမှာ ဖွဈသလို အရကျကိုလညျး သောကျဖို့ သငျ့တဲ့ ပမာဏထကျ ပိုမသောကျမိဖို့ သတိပွုရပါမယျ။
ကငျဆာရောဂါ ကို ဖွဈစနေိုငျတဲ့ စကျရုံသုံး အညဈအကွေးတှေ ကိုလညျး တတျနိုငျသမြှ ရှောငျရပါမယျ။ ပွုပွငျထားတဲ့ အသားနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို လညျး အလှနျအကြှံ စားတာကို ရှောငျရပါမယျ။
ရောဂါပိုးကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ အသညျးကငျဆာတှေ မဖွဈဖို့ အတှကျ အသညျးရောငျ အသားဝါ ဘီပိုး ကာကှယျဆေးကို ထိုးထားရပါမယျ။
သားအိမျခေါငျးကငျဆာ ဟာလညျး Human papilloma virus တှကွေောငျ့ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီရောဂါပိုးတှေ ကူးစကျမခံရအောငျ ကာကှယျဆေးကို ကွိုထိုးသငျ့ပါတယျ။
ကငျဆာရောဂါ စဖွဈစတေဲ့ ပုံမမှနျဆဲလျပှားတာ ကို ကွိုတငျတားဆီးနိုငျအောငျ Antioxidant တှေ ပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှကေို မြားမြားစားပေးသငျ့ပါတယျ။
ကငျဆာရောဂါ ကွောငျ့ ဘာကွောငျ့ သဆေုံးရသလဲ ???
ကငျဆာရောဂါ ဖွဈတဲ့ အင်ျဂါတှေ ဟာ ကငျဆာကွောငျ့ အလုပျမလုပျနိုငျတော့ဘူး ဖွဈလာတဲ့ အခါ ပွငျးထနျတဲ့ လက်ခဏာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။
တဈခြို့သော ကငျဆာရောဂါ တှမှော ဟျောမုနျးတှေ ထှကျပါတယျ။ ထှကျတဲ့ ဟျောမုနျးတှဟောလညျး တဈခါတဈလေ ပွငျးထနျတဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုး တှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ကငျဆာဆဲလျတှေ အရေးကွီးတဲ့ ကိုယျအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှကေို ရောကျသှားတဲ့ အခါမှာလညျး အသကျအန်တရာယျ ရှိနိုငျပါတယျ။
ကငျဆာရောဂါ တှေ ဖွဈတဲ့ အခါမှာ ကိုယျရဲ့ ခုခံအားဟာ ကသြှားပါတယျ။ တဈခါတဈလညျး ကငျဆာရောဂါ ကို ကုသရတဲ့ ဆေးတှဟောလညျး ခုခံအားကို ကသြှားစနေိုငျတဲ့ အတှကျ ဒီလိုအခါမြိုးတှမှော ကိုယျတှငျးကို ပိုးမှားတှေ ဝငျရောကျပွီး အသကျကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
ဒီလို အသကျအန်တရာယျ ဖွဈစနေိုငျတဲ့ အကွောငျးအတျောမြားမြားဟာ ကငျဆာရောဂါ ပြံ့နှံ့တဲ့ အခြိနျမှသာ ဖွဈတာမြားပါတယျ။
ကငျဆာ မပြံ့နှံ့ခငျ မှာ စောစောစီးစီး သိရှိပွီး ကုသမယျဆိုရငျ ကငျဆာရောဂါကွောငျ့ သနေိုငျခဟြော လြော့ကသြှားနိုငျပါတယျ။
ကငျဆာရောဂါ ဖွဈခါစမှာ အလုံးအကြိတျဟာ သိပျမကွီးသေးတဲ့ အတှကျ ဒီလို ဖွဈခါစ အလုံးအကြိတျ ကို ဖွတျထုတျလိုကျမယျ ကုသလိုကျမယျ ဆိုရငျ ကငျဆာရောဂါ အရှငျးပြောကျသှားနိုငျပါတယျ။
ကငျဆာ ရောဂါ ဖွဈခါစမှာ စောစောစီးစီး ကုသနိုငျဖို့ အတှကျ ကိုယျမှာ ပုံမမှနျတဲ့ အကြိတျတဈခု ဖွဈလာခဲ့ရငျ ၊ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ တဈနရောရာပျေါလာခဲ့ရငျ ကငျဆာ ဟုတျမဟုတျ သိရှိဖို့ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆရာဝနျ နဲ့ တိုငျပငျ စဈဆေးပွီး ကုသရပါမယျ။
Can you prevent cancer?Dr. မွှေး